बाग्लुङ बाेबाङमा बाढिले २५ घर बगायो, १७ जना सम्पर्क विहिन | रक्त न्युज
बाग्लुङ बाेबाङमा बाढिले २५ घर बगायो, १७ जना सम्पर्क विहिन
गय राति परेको अविरल वर्षतका कारण भूजिखोलाको शीर देउरालीमा ठुलो पहिरो गएको छ । पहिरोका कारण आएको बाढिले ढोरपाटन नगरपालिकाको वडा नं. ९ र ८ मा जनधनको क्षति पु¥याएको छ । बाढिका कारण लाकुरीबोटमा ३ जना, सुकुरदुङमा १ जना दुनेपधेरामा ३ जना, घट्टबोटमा ७ जना, भुसुन्डेमा ३ जना व्यक्ति सम्पर्क विहिन रहेको स्थानीय जीवन पुनले जानाकारी दिनुभयो ।
यस्तै बाढिले, लाकुरीबोट ११ घर, दुनेपधेरामा ५ घर, घट्टबोटमा ८ घर भुसुन्डेमा १, घर बगाएको छ, भने सुकुरदुङको सरस्वति आधारभूत विद्यालय, सुप्राङको जनचेतना प्रावि, समेत बगाएको छ । साविक बोबाङमा रहेका ३ वडा जलविद्युत आयोजना र ३ वटा झोलुँगेपुल समेत बगाएको पुनले जानाकारी दिनुभयो । घटनाको एकिन विवरण आउन वाँकी रहेको स्थानीयले बताएका छन ।
रातिको समयमा आएको बाढिले यस्तो क्षति गराएको हो । एक जनाको शव भने बुर्तिवाङ पुरानो पावरहाउस नजिकै भेटिएको इलाका प्रहरी कार्यालय बुर्तिबाङले जनाएको छ । यस्तै ढोरपाटन घुम्न गएका गलकोटका एकजना व्यक्ति समेत बेपत्ता भएको स्थानीयले बताएका छन । भूजिखोलामा पहिरोले थुनिदा खोला बढेर आएको खबर भएसँगै ढोरपाटन नगरपालिकाको गादिखोला, सहीखोला, बुढाथोक, बुर्तिबाङ बजार, भिमगीठे बजार र खाल, खार, खर्वाङसम्म नदी तटमा रहेका बस्तिमा उच्च सतर्कता अपनाउन रातभर आग्रह गरिएको प्रहरीको भनाई छ । उता घटना स्थलतर्फ ईलाका प्रहरी कार्यालय बुर्तिवाङका प्रहरी निरीक्षक प्रकाशसिँह भण्डारीको नेतृत्वमा प्रहरी टोली प्रस्थान गरेको छ ।
तस्वीर : जीवन पुन
अघिल्लो लेखमाउपत्यकामा निषेधाज्ञाको मोडालिटी परिवर्तन, अब के-के गर्न पाइन्छ?
अर्को लेखमापहुँचका भरमा ठेक्का दिँदा मल हाहाकार , हेलचेक्र्याइँ पुरानै